Gabaryahay Sameey Waxyaabahan si Ninkaaga uu kuugu qaado Jacayl...
Haweeney kasta waxay dooneysaa in seygeeda ama ninkaaga uu aad u jeclaado isla markaana uu kali u ahaado.
Hadaba Aayaha Online, waxay diin soo gudbineysa qaabab jacayl waali ah looga keensado seygaaga.
Gabaryahay ninkaaga waxaad abaal marin uga dhigtaa xushmadda isla markaana tusi inuu qaali kugu yahay, walaasheyda qaaliga ah tani waa waxa ugu qaalisan ee aad ninkaaga u sameyn lahayd.
Qiimeey wax kasta uu sameeyo
Qiimeey waxa yare e uu kuu sameeyo, qiimeey waxa dhex dhexaadka ah ee uu kuu sameeyo, hadana qiimeey waxa weyn iyo wax kasta ee uu kuu sameeyo seygaaga ama ninkaaga, qiimeey joogitaankiisa, qiimeey dareenkiisa, haweeney kasta oo ninkeeda wax walba ku qiimeysa waxay heeysan doontaa nin nafta u hura oo wax walbo siiya.
Garab istaag, taageer waqti kasta iyo xaalad kasta, ficil ahaana ha ogaado inuu yahay halyeey dhabarka laga taaganyahay, markii aad waqti kasta agarab taagantahay waa hadiyadda ugu wanaagsan ee aad ku abaal marin lahay.
Waxyaabo lama filaan ah kadis uga dhig
Waad layaabeysaa hadaad ogaan lahayd in ragga ay jecelyihiin waxyaabaha kediska ah oo haweenkooda ay u sameeyaan, marka waxyaabaha wanaagsan ee uusan filaneyn kadis uga dhig, sida hadiyadaha iyo wixii lamid ah.
Kalgacayl u muuji waqti kasta
Kalgacayl u muuji seygaaga waqti kasta, jecloow marka uu saxan yahay iyo marka uu qaldanyahay, jecloow marka uu macaanyahay iyo marka uu qaraar yahay, wuxuu ogaanayaa jacaylka aad u qabtid aad ayuuna kuu qiimeynayaa, jacaylka uu kuu qabana xadka ayuu ka baxayaa waxayna taasi keeneysaa inuu si heer sare ah kuu xushmeeyo.
Mararka qaar dhageyso
Mararka qaar waxaad u baahantahay inaad dhageysatid oo aad dareen siisid, sii dareenkaaga marka arrintaan sameysidna hoos uga dir farriin aad ugu muujineysid qiimaha uu agtaada ka leeyahay.
Haddii aadan waxyaabahan u sameyn ninkaaga, marnaba maadan noqon qof kalgacayl leh.